hataru/हटारु: लोडसेडिगंले झन्डै मारेन उर्जामन्त्रीलाई
ऊर्जामन्त्री घोषणा गरिएको केही घण्टामै गोकर्ण विष्टमाथि खुकुरी हानिएको सूचनाले साँझपख सनसनी मच्चिएको थियो। मन्त्री पदको सपथ नखाँदै खुकुरी खाएपछि के हुने हो यो मुलुकमा? सुनियो, लोडसेडिङको मौकामा दुई युवकले मन्त्रीमाथि खुकुरी हाने। लोडसेडिङ र शान्ति सुरक्षा त के भनम् र खै? भइसक्यो। माओवादीको अथ्र्याइलाई मान्ने हो भने यो घटना पनि सुनियोजितरुपले 'रिमोट कन्ट्रोल'बाट भएको होला। चाहे तराई र सहरमा यात्रुबाहक बसमा पड्केका बम होऊन् चाहे अन्य, तिनलाई माओवादीले भारतको इच्छाविपरीत गठित 'खनाल सरकार'को 'बाइप्रोडक्ट' भन्दैआएको छ। माधव नेपाल सरकार जानेबित्तिकै हुन थालेका घटनालाई माओवादीले त्यसरी नै अथ्र्याएको छ।
यो घटनाले नेपाली कांग्रेस र एमालेका केपी-माधव गुटको 'माओवादीलाई गृह दिन हुन्न' भन्ने तर्कलाई कति बल देला? रामजाने।
जनता लोडसेडिङको मारमा परे पनि अघिल्ला ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने 'मन्त्रालयको जेनेरेटर घरमा जोडेको' सक्कली कथा कान्तिपुरमा दैनिकमा छापिएको थियो।
But Yasapali? मन्त्री आफैले लोडसेडिङको मार खाएपछि लोडसेडिङ हट्छ कि?
ढंगानाले hamroblog.com मा मज्जाले लेखेछन्। तपाईंको लागि त्यै यसमा सारिदिएँ हैं, गारो नमान्नु होला।
उर्जामन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै उर्जामन्त्री गोकर्ण विष्ट लोडसेडिगंको चपेटामा परे। सामाखुसीक्षेत्रमा लोडसेडिगंको अध्याराको विचमा उनीमाथी खुकुरी प्रहार भयो, जसवाट उनको देब्रे हातको हत्केला नराम्रोसंग काटिएको छ। धन्न, मार्शल आर्टका समेत खेलाडी भएकाले उनले आफ्नो प्रतिरोध कलाको प्रयोग गरेर ज्यान जोगाए। नत्र खुकुरी हान्नेहरुले उनको टाउकोनै ताकेको आक्रमणको प्रकृतीवाट प्रष्ट हुन्छ। आइतवार लोडसेडिगंकै मौका पारेर गणबहालमा व्यापारी अञ्जनीकुमार चाचनलाई गोली हानेर हत्यानै गरियो। उनलाई गोली हान्न आएकाहरुले भिडियो फुटेज सिसिटीभीमा कैद छ। तर बत्ति नभएकाले फुटेजमा केही चल्मलाएको झै देखिएपनि पहिचान गर्न सकिने अवस्थाको छैन।
४ महिना अगाडि लोडसेडिगंको मारमा नवविवाहित दम्पत्ति परेका थिए। आफ्नो विवाहको भोज सकाएर घर फर्कनेक्रममा अध्यारोको कारण सडकको अवस्था ठम्याउन नसक्दा बशुन्धारामा कार दुर्घटना भयो। जसमा दुलाहा र दुलही कारमा च्यापिएर मरे।
लोडसेडिंगको मार उद्योग, कलकारखानाको उत्पादनमा बढी परेको छ भन्ने चर्चा बढी नै हुन्छ। लोडसेडिगंकवाट सर्वसाधारणलाई पर्ने असर सामान्य मात्र हुन भन्ने विष्लेशणहरु पनि सुनिन्छ। विजुली नहुंदा गृहणीहरुले टेलिभिजनमा भारतिय टेलिसिरियल हेर्न नपाउने मात्र हुन भन्ने प्रतिकृया पनि एदाकदा सुनिन्छ।
तर, लोडसेडिगंको असर कतिसम्म पर्ने रहेछ भन्ने तथ्यको साक्षी स्वयम् नवनियुक्त उर्जामन्त्रीनै भए। विद्युतिय उर्जा लगायतकाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको मन्त्रालयमा नियुक्त भएका उनी अध्यारोका कारण नेपालीले ज्यानसम्मको जोखिम लिएर बाचिरहेका छन् भन्ने खतराको प्रत्यक्ष साक्षि बने। धन्न उनको भाग्यले साथ दियो र जोगिए। तर,भाग्यले साथ नदिने अञ्जनीकुमार चाचन जस्ता धेरै मारिएका छन् र मारिनसक्छन्।
कतै यसवाट चेतेर उनले उर्जामन्त्रीको रुपमा केही राष्ट्रिय उपलब्धीमुलक काम गर्छन कि? आशा गरौं
धन्याबाद नबिन,महत्वपूर्ण समाचार पढ्ने मैाका दिनु भएकोमा आगामी दिनहरुमा आशा राख्दछु साथै नयाँ बर्ष २०६८ सालको शूभकामना।